Arzantina: Hackathons Sy Ny Mangarahara Ara-bola Ao Bahía Blanca · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Hackathons Sy Ny Mangarahara Ara-bola Ao Bahía Blanca
Voadika ny 14 Jona 2017 4:21 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Febroary 2011 ity adika eto ity)
Araka ny hitantsika tamin'ny volana lasa, misy ny fotoana eo amin'ny fiainan'olom-pirenena mandrisika azy ireo mba hanova sy hihaika ny andrim-panjakana, ary hamorona vahaolana sy hilaza ny ahiahian'izy ireo momba ny zavatra manan-danja. Tamin'ny tafatafa fohy nataon'i Renata Avila avy ao amin'ny Tambajotran'ny Teknolojia ho amin'ny Mangarahara, nizara ny fomba fijeriny mikasika ny tahiry sy ny fitaovana famadihana tahiry ho tombontsoa lehibe ho an'ny olom-pirenena, mba hitakian'izy ireo ny zony sy ny mangarahara i Manuel Aristarian, Arzantiniana mpitarika tetikasa maro samihafa. Izy no olona ao ambadiky ny Gasto Público Bahiense ao Bahía Blanca sy GarageLab.
Raha nandre ny vaovao momba ireo fifanekena mampiadihevitra nataon'ny governemanta ao an-toerana ao an-tanànan'i Arzantina Bahía Blanca i Manuel Aristaran (@manuelaristaran), nijery ny tranonkalany [governemanta] izy ary nanamarika fa tsy azo nidirana tsotra izao ny fandanian'ny kaominina: navoaka tamin'ny lisitra lavabe izy ireo ary tsy nisy fitaovana hitrandrahana ny tahirin-kevitra, ary tsy nanome fomba mahomby sy ampy hijerena ny fandaniana ny endrika nampiasaina. Ka nanapa-kevitra hamaha izany olana izany izy ary handray ny mangaraharaha ao Bahía Blanca amin'ny dingana manaraka, azon'ny rehetra andraisana anjara.
RA: Inona no antony nanombohanao ny tetikasa?
MA: Nahaliana ahy hatrany ny politikam-bahoaka sy ny tena fiantraikan'ny lahatahiry tamin'ny fomba namolavolana azy ireo. Taorian'ny fivoahan'ny vaovao momba ireo fandaniana sasany mampiadihevitra nataon'ny governemanta ao Bahía Blanca, nahita aho fa ahitana vaovao momba ireo fifanarahana ara-barotra sy fandaniana (fividianan-javatra) sasany nataon'ny fanjakana ny tranonkalany. Navoaka ho lisitra lavabe ireo antontan-taratasy ireo, ary tsy manome fitaovana fanampiny hitrandrahana ny vaovao ny tranonkalan'ny kaominina. Nihevitra aho fa mety ho tetikasa faran'ny herinandro mahafinaritra ny fikarohana, fandrafetana sy fananganana tranonkala tsotra hanehoana izany vaovao izany (izany hoe, manova ny lahatahiry ho fahalalana). Taorian'ny faran'ny herinandro vitsivitsy, namoaka ny Gasto Público Bahiense aho.
RA: Ahoana no nandraisanao anjara? Inona no aingam-panahinao tamin'ny fanokanana ny faran'ny herinandro ho an'ny Gasto Público Bahiense?
MA: Mino aho fa ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-panjakana dia sarotra atao raha tsy mahatakatra ny fomba fiasan'ny governemanta isika. Izany hoe, tsy afaka manao zavatra tsy takatrao ianao. Ny famoahana ny lahatahirin'ny governemanta amin'ny fomba tsotra, fohy sy mazava dia dingana mankany amin'ny “fampianarana” ny olona momba ny asan'izy ireo eo amin'ny governemantan'izy ireo.
RA: Ahoana ny fiovan-javatra taorian'ny famoahana ny hevitrao? Nisy Tantara nahomby?
MA: Nisy ireo fanehoan-kevitra sasany avy ao amin'ny governemanta: nanambara ny tranonkalan'ny “tombontsoan'ny kaominina” ny mpanao lalàna ao an-tanàna. Nahomby tamin'ny fampianarana ireo manampahefam-panjakana sasany mikasika ny maha zava-dehibe ny famoaham-baovao amin'ny endrika malalaka sy manaraka ny fenitra ihany koa ny tetikasa.
RA: Azonao fariparitana aminay ve ireo sakana sy fanamby natrehinao tamin'ny fananganana ny tetikasa?
MA: Ny tsy fisian'ny lahatahiry tsara an'ny governemanta sy ny tsy fisian'ny fitsipika ara-dalàna mafonja izay miantoka fa hanohy hatrany ny famoaham-baovao. Ao Arzantina, vao manomboka ny hetsika ifotony OpenData. Miaraka amin'ny ONG hafa momba ny mangarahara, miezaka mihevitra fomba hafa hanentanana ny maha zava-dehibe ny hahatonga ny governemanta ho mangarahara sy mandray andraikitra kokoa izahay. Ka, manantena aho fa hitarika politika tsara kokoa momba ny mangarahara sy ny vaovao izany.
RA: Amin'ny maha olom-pirenena liana anao, tianao ve raha manao tahaka izany ihany koa ny governemanta hafa ao an-toerana? Mizara ny fahalalanao sy ny traikefanao amin'ny hafa ve ianao? Lazao misimisy kokoa “ny herin'ny kaody ifampizarana”.
MA: Nandritra ny Hackathon Open Data [LahaTahiry Misokatra] iray, ny kaody izay nampatanjaka ny Gasto Público Bahiense dia nampiasaina hahazoana ny lahatahirin'ny zavatra novidian'ny governemanta ifotony hafa ao an-toerana, ao Arzantina. Afaka mampiasa ny kaody avokoa ny tsirairay ary mampifanaraka izany. Ny hany atao dia ny manoratra ny kaody hangalàna ny lahatahiry avy ao amin'ny tranonkalan'ny tanàna.
RA: Nanome aingam-panahy ho an'ny hafa hitrandrahana ny tombontsoan'ny lahatahiry malalaka ny hevitrao, sa tsy izany? Ahoana no fomba fampiasan'ny olona ny fitaovanao?
MA: Eny, mpiantsehatra samihafa no nampiasa ny tetikasako tamin'ny fomba maro, ohatra, nampiasa ny tranonkala ho loharanom-baovao ny fampahalalam-baovao ao an-toerana, mampiasa ny tranonkala hijerena izay mpifaninana aminy ireo orinasa mivarotra any amin'ny governemanta ao an-toerana, ary rehefa misy ny fividianana ataon'ny governemanta, afaka mahita tondro tsara ahafahana mampitàha vidin-javatra ireo mpanjifa.
Fantatra tsara fa mielipatrana ny kolikoly ao Arzantina ka manakona ny rafitra ara-politika sy ny firoboroboana ara-toekarena, na dia nahita fianarana ambony aza ny olom-pireneny. Na izany aza, ireo “mpandraharaha ara-tsosialy” tahaka an'i Manuel dia nampiasa ny fahaizany mba hiteraka fiovana ary manasa ny hafa mba haka tahaka ny hevitra sy hanao toy izany koa, any rehetra any.